Izindaba - UXiao Jie uye eHaikou eyohlola amabhizinisi kazwelonke asebenza ngobuchwepheshe obuphezulu
UXiao Jie uye eHaikou eyophenya ngamabhizinisi kazwelonke asebenza ngobuchwepheshe obuphezulu
Ekuseni ngoNovemba 27, uXiao Jie, oyilungu leKomidi eliPhezulu leProvince Party Committee kanye noNgqongqoshe woMnyango Wezomsebenzi we-United Front, waya eHaikou eyophenya ngokwakhiwa nokuthuthukiswa kwamabhizinisi azimele asezingeni eliphakeme lombuso. Ugcizelele isidingo sokuqhubeka nokusebenzisa umoya weNgqungquthela Kazwelonke Kazwelonke Yezomnotho Ehlangene Yomsebenzi, ulwele ukwenza ngcono indawo yebhizinisi, uqondise amabhizinisi ukuze athuthukise ikhwalithi yezomnotho, ukusebenza kahle kanye nokuncintisana okuyisisekelo ngokusungula ubuchwepheshe, nokwenza imizamo ebambisene yokufaka isandla ukwakhiwa kweHainan Free Trade Port. UMnu Xiao waya kwaHainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd. naseHainan Yeguo Foods Co., Ltd., wayolalela imibiko yokwakhiwa nokuthuthukiswa kwenkampani nguMnu. Guo Hongxing noNks. Zhong Chunyan, izinhloko zezinkampani ezimbili, uvakashele izingxoxo zokukhiqiza nezama-R & D, wakhuluma nabasebenzi benkampani ubuso nobuso. Umoya weSeshini lesihlanu sePlenary Session seKomidi eliPhakathi le-19 leQembu lamaKhomanisi laseChina, futhi waxoxa futhi wabelana ngezingxoxo ngezindaba ezishisayo nezinzima amabhizinisi azikhathalelayo nenqubomgomo yeHainan Free Trade Port.
UMnu Xiao uveze ukuthi iHuayan Company neYeguo Company, njengebhizinisi likazwelonke lobuchwepheshe obuphezulu elihlanganisa ucwaningo lomkhiqizo nentuthuko, ukukhiqiza, nokuthengisa, banezigaba zebhizinisi, amamodeli asebenzayo, amasu okuthuthuka, kanye nobuchwepheshe obuyisisekelo bamalungelo okuzimela kwempahla ngokuhambisana nokwakhiwa kweHainan Free Trade Port. Ukubeka isikhundla, ithemba libanzi kakhulu. IHuayan Company izobambelela ngokunganqikazi enhlosweni "yokuzibophezela ebhizinisini le-collagen nokusebenzela impilo yabantu", iqhubeke nokujulisa ukuthuthukiswa kwempilo yasolwandle nemithombo yezinhlanzi yaseHainan, iphinde ikhuthaze ukuthuthukiswa okuqhubekayo komkhakha we-fish collagen peptide. Inkampani yakwaYeguo kufanele inikeze ukudlala okugcwele endimeni yomsunguli nomholi wemboni yezithelo zikakhukhunathi wasekhaya, futhi izame ukwakha ibhizinisi lokukhiqiza izinto zikakhukhunathi ngobukhulu ngobuchwepheshe eChina nasemhlabeni jikelele. Ubuye wagqugquzela lezi zinkampani ezimbili ukuthi ziqhubeke nokuqinisa ukuzethemba kwazo entuthukweni ngaphansi kwesizinda sokwakhiwa kweHainan Free Trade Port, futhi zigqugquzele umoya ovelele wamabhizinisi nobungcweti bokuletha "phambili" futhi "balinge ukuhola umhlaba" ; ukugcizelela emisha nasekuthuthukiseni okuqhubekayo Ukuncintisana kweMakethe nezinto zomkhiqizo eziyinhloko, kusetshenziswa ichweba lokuhweba lamahhala njengengxenyekazi nesisekelo sokuzuza ukuzinza okuqinile, ukuya emhlabeni, nokufuna intuthuko enkulu; sebenzisa izidingo "ezimbili zezempilo", futhi ukhuthaze ezamabhizinisi ukuthi zikhule ziphilile.
UMnu Xiao ugcizelele ukuthi iHainan Free Trade Port inezinzuzo ezingenakuqhathaniswa maqondana nokuma kwamasu, izinjongo zentuthuko, kanye nezinqubomgomo eziyinhloko. Ukwakhiwa kweFree Trade Port kuyisigaba esihle kakhulu sokuthi osomabhizinisi abazimele baqale amabhizinisi abo. UMnyango Wezomsebenzi we-United Front kanye neFederation of Industry and Commerce kuwo wonke amazinga esifundazweni, njengabaholi futhi abahola ukuthuthukiswa komnotho wangasese, kumele bafunde, bakhangise, futhi basebenzise inkulumo ebalulekile kaNobhala Jikelele u-Xi Jinping kanye nomoya Iseshini Yesihlanu Yenkulungwane Yekomidi Elikhulu le-19 njengenkathi yamanje neyesikhathi esizayo. Umsebenzi oyinhloko wezepolitiki ukwakha izinkonzo zokubekwa kwezinkampani, ukumemezela nokuqeqesha, nokukhuthaza ukuqaliswa “kwezinkundla ezintathu”; kuyadingeka ukuxhumanisa ngenkuthalo ukuqaliswa kwezinqubomgomo ezifanele zokusiza ezinkampanini, ukuqinisa ukuqondiswa kwezigaba, nokuqalisa izinqubomgomo ezincike kumabhizinisi nasemapaki; qhubeka nokusebenzisa "izikhalazo" "Ngesitimela", wakhe uhlu lwezinkinga zebhizinisi, futhi usebenzise izinqubomgomo ukuthuthukisa isisombululo sezinkinga zebhizinisi; kumele sidlale ngokugcwele kuzinzuzo zesakhiwo esisha somsebenzi wobumbano obumbene futhi siqonde "ukusetshenziswa okuyisihlanu", okungukuthi, ukusebenzisa ukuhlela, ukusebenzisa izinqubomgomo, ukuqalisa ukusebenza kwamaphrojekthi, ukusebenzisa izinsiza, ukwenza ukuphathwa, ukuhlinzeka ngemikhumbi yenhlangano kanye nesiqinisekiso senkonzo amabhizinisi azimele ukungena, ukutshala imali nokwakha eHainan, futhi ngokuhlanganyela kwakhiwe indawo yebhizinisi evumayo ekuthuthukisweni okunempilo komnotho wangasese.
UKang Baiying, iSekela likaNgqongqoshe oPhethe loMnyango Wezomsebenzi we-United Front weKomidi Leqembu Lesifundazwe; Chen Jianjiao, Iphini LikaNgqongqoshe kanye noMqondisi Wehhovisi Lesifundazwe lase-Overseas Affairs Chinese Affairs; UWang Sheng, iSekela likaSihlalo Ogcwele Wenhlangano Yesifundazwe Yezimboni Nezohwebo; UZheng Boyan, Ilungu leKomidi Elimi LeKomidi Leqembu likaMasipala waseHaikou kanye noNgqongqoshe we-。